❝ တီတီသိသမျှ ဂစ်တာအကြောင်း ❞ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 6:28 PM | No မှတ်ချက် | Music Crazy Te Te Tar Tar
ယနေ့ဂစ်တာတွေရဲ့ ခေတ်စားမှူ့သက်တမ်းဟာ တိုတောင်းသေးတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပေမဲ့ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အာရှမိုင်းနားလို့ ခေါ်တဲ့ဒေသမှာ ဘီစီ ၁၀၀၀ခန့် နဲ့အီဂျစ်မှာ အေဒီ ၆၀၀ ခန့်လောက်က ဂစ်တာနဲ့ နီးစပ်သော ရုပ်ကြွင်းတွေကို တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ အရ ဂစ်တာရဲ့အစောဆုံးတူရိယာဟာ အာရပ်နိုင်ငံတွေကနေ စတင်ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားခဲ့ပြီး ဂစ်တာဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ ရှေးဂရိလူမျိုးတွေ အမြတ်တနိုး တီးခတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကီသာရာ(KITHARA) တူရိယာမှ ဆင်းသက်လာတယ်လို့လက်ခံထားကြပါတယ်။ အေဒီ ၇၁၁ မှာ မူးဝါး(MOOR)လို့ ခေါ်တဲ့ 
လူမျိုးစုတွေဟာ အာဆီးရီးယန်း၊ ပါရှန်းနဲ့ဟီးဘရူးနိုင်ငံတွေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့ ဂစ်တာဖြစ်လာမယ့် တူရိယာလို့မှန်းဆရမယ့် ရက်ဘတ်(REBEC) တူရိယာ အပါအ၀င် ကြိုးတပ်တူရိယာ အမျိုးမျိုးကို စပိန်နိုင်ငံကို ယူဆောင်သွားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတူရိယာဟာ ယနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ နေရတဲ့ဂစ်တာပုံစံနဲ့လုံးဝမတူသေးဘဲ အရွယ်အစား သေးငယ်ပြီး တယောနဲ့ပိုတူပါတယ်။
ဂစ်တာရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် နှင့်ဖွဲ့စည်း ပြုလုပ်ထားပုံဟာ တီးခတ်တဲ့ အခါ လွယ်ကူစေဖို့နှင့်ခေတ်မှီစေဖို့တို့ အတွက် ကိုယ်ကြိုက်သလို လုပ်ကြတဲ့ အတွက် သူရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာ
ေ၀၀ါးမှေးမှိန်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၂ရာစုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွေကနေ ခုခေတ်ဂစ်တာနဲ့နဲနဲပါးပါးတူတဲ့ ကြိုးတပ်တူရိယာတခုဟာ ဥရောပ တစ်လွှားမှာ ပြန်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတူရိယာဟာ နှစ်ပင်စီပူးထားတဲ့ ကြိုး၎စုံ၊ စုစုပေါင်းကြိုး ၈ချောင်း တပ်တဲ့ တူရိယာဖြစ်ပြီး ဂစ်တန် (GITTERN) လို့ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ စောင်းသမား ခရီးသွားတွေ၊ ကဗျာဆရာ ခရီးသွားတွေ၊ အဆိုတော်ခရီးသွားတွေဟာ အဲ့ဒီတူရိယာနဲ့တွဲပြီး သူတို့ရဲ့ ခံစားဖွဲ့သီဆိုမှူ့တွေကို အလယ်ခေတ် (AD 600-1450) တလျှောက်လုံး သီဆိုတီးမှူတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂစ်တာရဲ့ တိကျခိုင်မာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုတော့ ၁၃ရာစု စပိန်နိုင်ငံက မူးဝါးလူမျိုးတွေရဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေပွဲတွေကနေ စတင်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း ၃၀၀လောက် ကြာသွားပြီးတဲ့နောက် ၁၆ရာစု စပိန် နိုင်ငံမှာ တီးခတ်တဲ့ ပုံစံသစ်၊ ဟန်သစ်တွေ အပြိုင်အဆိုင်တိုးတက်လာပြီး ဂစ်တာအမျိုးအစားအနေနဲ့ အနည်းဆုံး ၃မျိုးလောက် ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ၁။ ကြိုး၆စုံ ၊ စုစုပေါင်း ၁၂ကြိုးတပ် ဗီဟူလာ(VIHVELA) အဲ့ဒီတူရိယာနဲ့ တွဲဖက်တီးခတ်ဖို့သင်္ကေတဇယားနဲ့ရေးတဲ့ နှစ်ယောက်တွဲတီးလုံး၊ သီချင်း၊ အကသီချင်းတွေ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း စာအုပ် ၇ အုပ်ထုတ်ဝေ ခဲ့ပါတယ်။ ၂။ ကြိုး၅စုံ၊ စုစုပေါင်း ၁၀ကြိုးတပ် ဂစ်တာရာအက်စပါနိုလာ(GUITRRA ESPANOLA) ၁၆ရာစု အဆုံးပိုင်းကနေ ၁၇
ရာစုတလျှောက်လုံး ခေတ်စားခဲ့ပြီး လူးတ်(LUTE) တူရိယာရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုး အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဂစ်တာရာအက်စပါနိုလာကော့ဒ်နဲ့တီးဖို့ အတွက်ပဲ အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ၁၇ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတော့ ပြင်သစ်ကို စိမ့်ဝင်ပျံနံ့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ၃။ ကြိုး၎စုံ၊ စုစုပေါင်း ကြိုး၈ချောင်းတပ် ဂစ်တာရာ(GUITARRA) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉ ရာစု အစောပိုင်းမှာ စပိန်နိုင်ငံသား ဖာနန်ဒိုဆော (FERNANDO-SOR 1778-1839) ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
အတိုင်းအတာအထိ ကျော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဂစ်တာပညာရှင်တဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒီယွန်ဆီယိုအာကွေဒို (DIONISIO AQUADO)၊ မဲတီအိုကာကက်ဆီ (MATTEOCARCASSI)၊ ဖာဒီနန်ကာရူလီ (FERDINAND CARULLI)၊ မူရိုဂျူလီယန်နီ (MAURO GIULIANI) တို့ဟာလည်း နာမည်ကျော် ဂစ်တာပညာရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဖာနန်ဒိုဆောနဲ့ သူ၏ ခေတ်ပြိုင်တွေဟာ သင်တန်းကျောင်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း၊ ဂီတပွဲတွေ တင်ဆက်ခြင်း စတဲ့ကြိုးပမ်းမှူတွေနဲ့ ဂစ်တာပညာကို ပြန့်ပွားဖို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ဖရန်စစ်စကိုတားရက်ဂါ (FRANCISCO TARREGA 1852-1909) ဟာ အထူးချွန်ဆုံး ဂစ်တာသမားလို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး မျက်မှောက်ခေတ် ဂန္တ၀င် ဂစ်တာသမား တွေကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။
စည်ပင်တိုးတက်လာကာစ အမေရိကန်မှာ စွန့်စားသွားလာသူတွေ၊ နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသူတွေဟာ လှည်းတန်းရှည်ကြီးတွေနဲ့ လှည့်လည်သွားလာကြပြီး စခန်းချ အပန်းဖြေတဲ့အခါ မီးပုံဘေးတွေမှာ ဂစ်တာတီးပြီး အမောဖြေ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဂစ်တာတွေဟာလည်း
အမေရိကန်၏ နေရာ အနှံ့အပြားလိုက်ပါခဲ့ရပြီး ၁၉ရာစု အကုန် ၁၉၀၀ပြည့်နှစ် တစ်ဝိုက်မှာတော့ အမေရိကန်လူမည်းတွေရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အာဖရိကနွယ်တဲ့ ရက်ဂေးနဲ့ ဘလူးစ် အမျိုးအစားတွေဟာ အစပျိုးအားယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်တောနေသူတွေရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတိုင်းမှာလည်း ဂစ်တာနဲ့တယောဟာ မပါမဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ ဖာနန်ဒိုဆောကနေ စတင်ပြန့်ပွားခဲ့တဲ့ ဂန္တ၀င်ဂစ်တာ တီးဟန်တွေဟာလည်း အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး စပိန်လူမျိုး အဲန်ဒရက်ဇရိုးဘီးယား (ANDRES SEGOVIA 1893-1987) ရဲ့ ၁၉၂၈ နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဂန္တ၀င်ဂီတပွဲ ကစပြီး ဂစ်တာကို ကမ္ဘာက အာရုံစိုက် လာကြပါတယ်၊ ဇရိုးဘီးယားဟာ သူ့ဘ၀တလျှောက်လုံး ဂစ်တာကို အမြတ်တနိုး တီးခတ်ခဲ့ပြီး ဂစ်တာဂန္တ၀င် တေးသီချင်းပေါင်း များစွာကို ဖွဲ့ဆိုရေးစပ် ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဂစ်တာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အမေရိကန်မှာရှိတဲ့
ကျောင်းပေါင်း ၁၆၀၁ ကျောင်းမှာ သင်ကြားပို့ချနေဆဲပါ။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ ဂစ်တာရဲ့ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမူကို တဟုန်ထိုးတိုးတက်စေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုကတော့ ရှာလီခရစ်စတင်ဟာ ဂစ်တာရဲ့အသံကို ပစ်ကပ် (PICK UP) တပ်ဆင်ပြီး အထူးချဲ့ထွင်ပေးတဲ့ အသံချဲ့စက်နဲ့ တွဲဖက်ပေးနိုင်ခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ဂစ်တာသံရဲ့ အတိုးအကျယ်ကို လိုအပ်သလို လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို တဆင့်ပြီးတဆင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်ရောက်ရှိ လာပါတော့တယ်။
✫ ဂစ်တာ နှင့် ဂီတအဖွဲ့များ၏ ထိုးဖောက်လာမှု့ ✫
ရော့ခ်အင်ရိုး (ROCK AND ROLL) လူငယ်အဆိုတော် ပရက်စလေဟာ ၁၉၅၆ မေလမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ (HEART BREAK HOTEL) ဓါတ်ပြားနဲ့ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး
သူ့ရဲ့ဂစ်တာလွယ်ပြီး သီချင်းဆိုဟန်တွေကြောင့် လူငယ်ထုကြားမှာ ဂစ်တာဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြန့်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၀ နှစ်တွေမှာ ရိုးရာဘလူးစ် (TRADITIONAL BLUES) နဲ့ ခေတ်ပေါ်ဂီတ (WHITE POP MUSIC) ရောမွှေထားတဲ့ (RHYTHM AND BLUES (or) R n ဂီတ အမျိုးအစား ခေတ်စားလာခဲ့ပြီး လူမည်း ဂစ်တာသမား ချပ်ဘာရီ (CHUCK BERRY) ရဲ့ လက်သံတွေဟာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပေါ် ဂီတအုပ်စုတွေ အပေါ်မှာ သြဇာလွှမ်းမိုး သက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပရက်စလေရဲ့ သီချင်းတွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ လူငယ်တွေထဲကနေ ဖွဲ့ စည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ပေါ့နဲ့ ရော့အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ (BEATLES 1960) ဟာ ကမ္ဘာမှာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဂစ်တာကို ခေတ်ပေါ်ဂီတရဲ့ အဓိကမဏ္ဍိုင် တူရိယာ အဖြစ်ကို ရောက်ရှိအောင် ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ (COUNTRY) နဲ့ (JAZZ) ဂစ်တာအကျော်အမော် တွေဖြစ်ကြတဲ့ ချက်အက်ကင် (CHETATKINS)၊ မာ့ခ်နော်ဖလာ (MARKNOPELER) နဲ့ ရွိုင်းကလာစ် (ROY CLARK) တို့နဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဂစ်တာတီးဝိုင်း VENTURES တို့ရဲ့ ဂစ်တာလက်သံတွေဟာ ဂစ်တာဝါသနာရှင်တွေ အများအပြားကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ အင်အားကောင်းနေတဲ့ ROCK ဂီတရဲ့ Distortion အသံတွေ. Feedback အသံတွေ၊ wah wah effect စတာတွေရဲ့ ဖခင်ကြီးတဦးကတော့ လူမည်းဂစ်တာသမား ဂျင်မီဟန်းဒရပ် (JIMMI HENDRIX 1942-1970) ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘယ်ဖက်နဲ့ ဂစ်တာကို ကျွမ်းကျင်စွာ တီးခတ်ခဲ့တဲ့ ဟန်ပန်တွေဟာလည်း လူငယ်ပရိသတ်တွေကို အရူးအမူးဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် ဂစ်တာကုမ္ပဏီကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ ဂစ်ဘဆင် (GIBSON)၊ ဖန်ဒါ (FENDER)
တို့ဟာလည်း ဂစ်တာအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးကို ပုံစံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါတွင် လျှပ်စစ်ဂစ်တာ (ELECTRIC GUITAR) တွေနဲ့ အသံကို အမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်တဲ့စက် (GUITAR EFFECT PROCESSOR )၊ အသံချဲ့စက် (AMPLIFIER) တွေကို တဆင့်ထက်တဆင့် ပိုမိုကောင်းမွန် တိုးတက်လာအောင် တီထွင်ဖန်တီး အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဂီတအမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြတဲ့ ဂန္တ၀င်ဂီတ (CLASSICAL)၊ စပိန်ဖလန်မန်ကို (FLAMINCO)၊ ဘလူးစစ် (BLUES)၊ ဂျက်ဇ် (JAZZ)၊ ကလပ်စစ်ရော့ခ် (CLASSIC ROCK)၊ ရော့ခ်အဲန်ရိုး (ROCK n ROLL)၊ ရစ်သန်အဲန်ဘလူးစ် (R n B)၊ ကျေးလက်ရော့ခ် (COUNTRY ROCK)၊ ဟာ့ဒ်ရော့ခ် (HARD ROCK)၊ ဟဲဗီးရော့ခ် (HEAVY ROCK)၊ မယ်တယ်ရော့ခ် (METAL ROCK)၊ လိုက်ရော့ခ် (LIGHT ROCK)၊ အော်တာရော့ခ် (ALTERNATIVE ROCK)၊ အင်ဒီရော့ခ် (ANDI ROCK) စတဲ့ အမျိုးအစားများစွာ တွေမှာ ဂစ်တာကို လုံးဝမပါမဖြစ် တီးခတ်ကြရပြီး ဂစ်တာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံး ကိုလည်း အပြိုင်အဆိုင် ဆက်လက်တီထွင် ထုတ်လုပ် တီးခတ်နေကြတဲ့အတွက် ဂစ်တာတူရိယာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာလည်း နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင်ဆက်လက် ရှင်သန်နေဦးမှာပင် ဖြစ်ပါတယ်။